Umhlaba ugubha unyaka omusha wezi-2018 wamaShayina ngesitayela | Izindaba Zokuhamba
Umhlaba ugubha uNyaka Omusha WamaShayina wezi-2018 ngesitayela
NgoLwesihlanu olwedlule umphakathi waseChina ugubhe unyaka omusha, ikakhulukazi u-4716 ngokwekhalenda lawo, iholide lendabuko elibaluleke kakhulu ezweni lase-Asia. Ku-2018, isibonakaliso senja yisibalo esiphakathi, lapho izici ezinjengokwethembeka, uzwela, isibindi nobuhlakani kuthiwa.
Yize isibonakaliso ngasinye sinonyaka ohlukile, ngo-2018 amaShayina abona unyaka wenhlanhla yomuntu siqu neyobungcweti ikakhulukazi kulabo bantu abanamandla amakhulu okuzivumelanisa nezehlakalo zempilo.
Imigubho yoNyaka Omusha waseShayina izohlala kuze kube ngumashi 2, okuyizinsuku eziyi-15 sezizonke lapho, ngemicikilisho, imindeni yaseChina yenza ushintsho kusuka onyakeni weqhude lomlilo laya onyakeni wenja yomhlaba ukuze ihehe injabulo nenjabulo. Ngikufisela inhlanhla.
ESpain, umphakathi waseChina mkhulu futhi amadolobha afana neBarcelona, ​​iMadrid noma iValencia nawo alungiselela ukugubha nokwamukela uNyaka weNja.
1 Siyajabula ngo-4716!
2 Ugubha kanjani unyaka omusha eChina?
3 Futhi emhlabeni?
4 Ingabe uNyaka Omusha WamaShayina ugujwa eSpain?
Ikhalenda lamaShayina lisuselwa ezibalweni zasendulo zesikhathi ezisuselwa ekubhekeni izigaba zeNyanga ukunquma ngemijikelezo yezolimo, injini yezomnotho ezikhathini zasendulo.
Ngokwaleli khalenda, ukuvela kwenyanga yokuqala entsha yikhona okuhambisana nokushintsha konyaka nemikhosi, into evame ukwenzeka phakathi kukaJanuwari 21 noFebhuwari 20.
Ugubha kanjani unyaka omusha eChina?
E-China, kungamaholide kazwelonke lapho iningi labasebenzi lineholide leviki lonke. Unyaka Omusha uphawulwa ngokuhlangana kwemindeni, okudala izigidi zabantu abafudukayo ezweni.
Ekuqaleni komkhosi, imindeni yaseChina ivula amafasitela neminyango yamakhaya ayo ukukhipha zonke izinto ezimbi ezize nonyaka odlule. Khonamanjalo, ezindaweni ezivulekile, imigwaqo igcwele amalambu abomvu futhi kunombukiso wamadragoni namabhubesi okuxosha imimoya emibi. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sonyaka wenja, zonke izinhlobo zezinto ezihlobene nesibalo sazo zithengiswa ezitolo.
Izenzo zendabuko ziphetha ngomkhosi wezibani eziphonswa esibhakabhakeni ukuze zikhanyise lapho ziphakama futhi kukhonjiswa ngeziqhumane. Kodwa-ke, eBeijing kulo nyaka ngeke kube khona iziqhumane noma iziqhumane njengoba kushaywe umthetho obenqabela ngaphakathi komgwaqo wesihlanu oyindilinga ngenxa yokungcola okuphezulu.
Okunye ukwaziwa kwalo mgubho ukuthi akekho umuntu ovame ukukhuluma ngezinto ezedlule, ngoba kubhekwa ukuthi kuheha amashwa futhi izingane azijeziswa, futhi zinenkululeko ethile yokwenza okubi.
Isithombe | ILondon ngeSpanishi
Ukufika koNyaka Omusha WamaShayina 2018 bekugujwe ezingxenyeni eziningi zomhlaba. E-United States, kwahlelwa umbukiso weziqhumane eNew York City, yize ukuqala konyaka omusha kwakugujwa naseSeattle, San Francisco noma eWashington.
ILondon ithi iyidolobha eligubha kakhulu uNyaka Omusha waseChina ngaphandle kwezwekazi lase-Asia. Lapho, izenzo zenziwa eWest End edlula eChinatown eya eTrafalgar Square, ephethe imicimbi ebaluleke kakhulu. Imisebenzi yamahhala ehlelwe yiLondon Chinatown Chinese Association futhi iheha amakhulu ezivakashi minyaka yonke.
Amanye amazwe agubha uNyaka Omusha waseChina yiPhilippines, iTaiwan, iSingapore, iCanada noma i-Australia, phakathi kwamanye.
Ingabe uNyaka Omusha WamaShayina ugujwa eSpain?
ISpain nayo ibandakanyekile emicimbini yokugubha uNyaka WaseChina 2018. Isibonelo IMadrid ihlele imisebenzi yazo zonke izinhlobo kuze kube nguFebhuwari 28 ukuze izivakashi nabantu bendawo bafunde kabanzi futhi bajabulele isiko lamaShayina. Amakhonsathi, imibukiso, imidanso nemizila ye-gastronomic kungeminye yemicimbi ehleliwe.
Unyaka Omusha WamaShayina nawo ugujwa eBarcelona ngemibhikisho, imibukiso yomculo kanye nokudla okunezindlela zokudla nezamasiko kuhambo lweLluís Companys. Amanye amadolobha afana neGranada, iPalma noma iValencia nawo azohlela imisebenzi ephathelene neNyaka Yezinja Zomhlaba.
Ngakho-ke noma ngabe ukuphi, uqinisekile ukuthola indawo ozohlanganyela kuyo emikhosini kaNcibijane futhi ube nesikhathi esimnandi!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izaziso » Umhlaba ugubha uNyaka Omusha WamaShayina wezi-2018 ngesitayela
Amaqhinga ayi-8 okuthola ihhotela elifanele